Ogaden News Agency (ONA) – Aqoon La’aan Waa Iftiin La’aan; Maamulka iyo Baarlamaanka Deegaanka Soomaalida (Kililka 5aad) oo Isu Ansixiyay Miisaaniyad ah 3.58% Miisaaniyadda Ethiopia ee 2007 (2014/2015)! Jig-Jiga – Suubane Daraar Deerow
Aqoon La’aan Waa Iftiin La’aan; Maamulka iyo Baarlamaanka Deegaanka Soomaalida (Kililka 5aad) oo Isu Ansixiyay Miisaaniyad ah 3.58% Miisaaniyadda Ethiopia ee 2007 (2014/2015)! Jig-Jiga – Suubane Daraar Deerow
Posted by ONA Admin	/ July 19, 2014
Maamulka Kililka 5aad ayaa ah wax lagu wada wareeray. Dadka gobolka, gaar ahaan shacabka caadiga ah, aqoonyahanka iyo odayaasha ayaa aaminsan in maamulka hadda ka jira Jig-Jiga uu yahay kii abid ugu xumaa ama musuq badnaa oo uu horboodayo nin waalan (Cabdi Maxamuud Cumar ama Cabdi Iley) oon aqoon iyo khibrad u lahayn maamulka wanaagsan iyo xaaladda dalka Ethiopia uu ku sugan yahay maanta. Shaqaaalaha iyo madax xafiisyeeda ayaa ayaguna aaminsan inay xero ugu jiraan ruux aan miyir qabin, meesha madaxda Dowladda Federaalka Ethiopia ay aaminsan yihiin inuu Cabdi Iley “Shuftay” loo baahan yahan yahay, balse Kharibaya oo Bur-Burinaya Kililka 5aad iyo Ethiopia.
Tusaale ahaan wufuud heer federal ah ayaa booqasho qiimayn ah ku tagay Godey, Shiniile iyo Liibaan. Wafdigu wuxuu waayay wax la qabtay oo shaqa ah. Godey ayaa wafdigu ugu tagay niman 10 ah oo ka tirsan Al-Itixaadkii isu dhiibay Xabashida oo haysta qoryo. Markii la waydiiyay “sababta ay qoryo ugu dhax haystaan beerta” waxay ku jawaabeen “ONLF ayaan iskaga ilaalinaynaa”. Wafdigii iyo Cabdi Iley labaduba way ka xumaadeen jawaabtaa, waxayna noqotay inuu Cabdi Iley ka shakiyo Al-Itixaad. Wafdigii Dowladda Federaalka Ethiopia aad ayuu uga xumaaday natiijada lacagihii faraha badnaa ee loo isticmaalay mashaariicdan Been-Beenta ah. Khubara ka socotay Wasaaradda Beeraha iyo Baanka Dunida (World Bank) ayaa shaagay in waxay soo arkeen uusan jirin. Taasi micnaheeda ayaa ah “Nimaan talin jirin hadduu taliyo, nimaan tagi jirin ayaa taga” waana Cabdi Iley iyo kooxdiisa “Aaran Doofaar” oo ku bayac-mushtarya gobolka iyo dadkiisa masaakiinta ah.
Miisaaniyada Sanadkan 2014/2015 (ama 2007 Xabashida)
Sida warbaahinta Xabashidu qortay maalinkii Talaadada (15-07-2014) ayuu Maamulka iyo Baarlamaanka Deegaanka Soomaalida (Kililka 5aad) ansixiyay miisaaniyada gobolka oo dhan 6.4 Billion Birr meesha miisaaniyada Ethiopia ay tahay 178.6 Billion Birr. Qorshahan waxaa ogolaaday 152 xildhibaan oo ka mida tirada guud ee baarlamaanka deegaanka oo ah167 xildhibaan. Hadaba 6.4 Billion Birr waxay u dhigan tahay 3.58% miisaaniyadda dalka. Su aasha ayaa ah, ayada oo dhanwalba markii laga fiiriyo uu kililku xag u leeyahay inuu helo lacag intaa ka badan, sideey madaxda xabashidu ugu qoondeeyeen 3.58% gobolka? Haddiibase ay xabashidu qoondeeyeen 3.58% in loo xariiqo kililka side ayay maamulka iyo 152 xildhibaan oo Soomaali ah u ogolaadeen in loo xariiqo 3.58%?
Hadaba Cabdi Iley iyo kooxdiisa “Aaran Doofaar” ayaan ahayn kuwo aqoon ama ficil iyo sharaf aan lahayn inay wax maamulaan. Cabdi Iley iyo kooxdiisa “Aaran Doofaar” ayaa ah kuwo kaba dhacsan nidaamka ka jira dalka iyo wax-qaybsiga, gaar ahaan qorshaynta iyo lacaga horumarinta loogu tala galay. Waxaana la dhihi “Doofaar ficil la’aan ayaa loo cadaabaa!”. Hadaba kuwa leh “Xabashi ayaa wax noo ogol ama horumar ayay ka samaysay gobolka” ha ogaadaan xaqiiqada meesha ka jirta oo ah “wax maamul ah inuusan jirin. Xabashi horumar lama rabto dadka Soomaalida gobolka. Cabdi Iley iyo kooxdiisa “Aaran Doofaar” waa budhcad ama shufta u shaqayanaysa xabashida”.
Markii aan akhriyay qoraalka kililku kazoo saaray arinkan miisaaniyada ayaa waxaan soo xusuustay hadal aan ka akhiriya ogaden24.com oo Xaaji Mohamed Cabdi Yaasiin ” Diirane ” uu kaga hadlay Soomaalida manta iyo qaabka ay xabashidu u bahdalasay asaga oo yidhi “Ethiopia oo Sidii daanyeero U isticmaasha Somaalida Muuqaal Xiisa badan”. Hadaba 152-ka xildhibaan ee Soomaalida ah “Ma Dadbaa Mise Waa Dugaag markay waxaan ogolaadeen”? Miyayna sax ahayn inay tagaan Addis Ababa oo Dowladda Federaalka Ethiopia ay waydiistaan xaqa ay ku leeyihiin dhaqaalaha wadanka ee la boobahayo? Yayse ka sugayaan inuu shacabkan rafaadsan u dodo xaqooda? waana Cabdi Iley iyo kooxdiisa “Aaran Doofaar” xagay dadka ku wadaan?
Suubane Daraar Deerow – 19 July 2014 / Jigjiga.